Ntuziaka zuru ezu maka iji LinkedIn Sales Navigator | Martech Zone
LinkedIn agbanweela ụzọ azụmaahịa si ejikọ ibe ha. Mee ihe kasi n’elu ikpo okwu a site na iji ngwa ahia Navigator ya.
Ndị ọchụnta ego taa, n’agbanyeghi etu ha siri buru ma ọ bụ pere mpe, dabere na LinkedIn maka ịnye ndị mmadụ gafee ụwa. N'ime ihe karịrị nde ndị ọrụ 720, ikpo okwu a na-eto kwa ụbọchị na nha na uru. E wezụga iwe mmadụ n'ọrụ, LinkedIn bụzi ihe kachasị mkpa maka ndị ahịa na-achọ ịmalite egwuregwu egwuregwu dijitalụ ha. Malite na-eme njikọ na-amụba na-eduga na-eke mma ika uru, ahịa na-atụle LinkedIn a oké ọnụ mgbakwunye na ha n'ozuzu marketing atụmatụ.
LinkedIn Maka B2B Ahịa
N'ime ihe ndị ọzọ, LinkedIn nwere mmetụta dị ukwuu na ahịa B2B. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị nde azụmaahịa 700 sitere na mba 200 + nọ na ikpo okwu a, ọ bụ ugbu a akụ bara uru maka azụmaahịa B2B. Nnyocha e mere na-egosi na 94% nke ndị ahịa B2B jiri LinkedIn kesaa ọdịnaya ha. Ndị guzobere ụlọ ọrụ B2B na ndị isi ụlọ ọrụ na-anwa ịghọ Ndị na-emetụta LinkedIn site na iwulite udiri onwe ha site na iji akuko akuko iji nwekwuo uzo, me ka amara ihe omuma, ma site na nke a, mee ka ahia di elu.
Ndị na-ere ahịa anaghị anọ n’azụ, ha na-ewukwasị ọwa ahịa na LinkedIn nke na-eduga n’ọgbọ ahịa dị elu. Ahịa Ahịa, ngwá ọrụ nke LinkedIn mere iji mee usoro a na ọkwa ọzọ. LinkedIn Sales Navigator dị ka nsụgharị pụrụ iche nke LinkedIn n'onwe ya. Ọ bụ ezie na LinkedIn adịlarị irè maka ire ere mmekọrịta mmadụ, Sales Navigator na-enye ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ ga-enye gị ohere ịchọta atụmanya ọbụlagodi na niche gị.
Enweghị n'ihu ado, a bụ a ngwa ngwa ndu-enyere gị aka malitere na ngwá ọrụ a.
Kedu ihe bụ LinkedIn Sales Navigator?
LinkedIn Sales Navigator bụ ngwa ahịa na-elekọta mmadụ nke na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịchọta atụmanya dị mkpa maka azụmahịa gị. Ọ na-eme nke a site na ịnye nhọrọ nzacha miri emi dabere na nkọwapụta nke onye ọrụ nke na-enye gị ohere ịme nyocha dị elu na-achọta atụmanya ị chọrọ.
N'iji Navigator Ahịa, ndị nnọchi anya ire na-enyocha isi ụzọ, nyochaa ọrụ ha, ma chọọ kọntaktị yiri nke ha nwere ike iru. Nke a na-enyere ha aka ibute ụzọ n’egwuregwu ha site na ịwulite paịpụ dị irè iji mepụta ahịa ka mma.
Ọrụ ọgbara ọhụrụ (na anyị hụrụ ya n'anya). Ndị ọrụ Naịjirịa Ahịa na-enweta mbuli elu nke + 7% na mmeri mmeri site na ọrụ ọgbara ọhụrụ.
Sakshi Mehta, Onye isi ahia ahia ahia, LinkedIn
Tupu ị banye n'ime ojiji ahụ, ka anyị lelee ma ezubere gị ọrịre ụgbọ mmiri.
Kedu onye ị kwesịrị iji LinkedIn Sales Navigator?
LinkedIn Sales Navigator bu kpomkwem ihe ichoro ma oburu na ibu onye ahia B2B.
Ahịa Navigator bụ ngwaahịa akwụ ụgwọ maka onye ọ bụla na LinkedIn. Ndebanye aha nwere ike iche. You nwere ike ịhọrọ otu, otu, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndenye aha ụlọ ọrụ dịka mkpa gị na ogo ụlọ ọrụ gị.
LinkedIn Sales Navigator na-enye anyị ohere ịchọta ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ na nzukọ ahụ ma bịakwute ha tupu ha eleba anya na ngwaahịa isii dị iche iche iji mee ka ha hụ nsogbu ha n'ụzọ dị iche ma mesịa ghọta na e nwere otu ezigbo ngwọta kacha mma.
Mara ka Hyland, Akamai Teknụzụ, na Guardian sirila jiri LinkedIn Sales Navigator maka ire ahịa mmadụ.
Etu esi eji LinkedIn Sales Navigator
Malite na isi nke Sales Navigator iji mee nke ọma na ngwa a na 2020, anyị ekpuchila gị n'akụkụ niile. Nke a bụ otu ị si amalite ọkọ.
1. Malite Ọnwụnwa Na-akwụghị Onwe Gị
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịga na Ahịa Navigator peeji nke ma pịa na Malite Ọnwụnwa Free Gị nhọrọ. LinkedIn na-ahapụ gị ka ị jiri Ahịa Navigator n'efu maka ụbọchị 30. Yabụ, gbaa mbọ hụ na i jiri nke ahụ mee ihe n’ọnwa izizi gị.
Ga-enye ozi kaadị akwụmụgwọ gị iji debanye aha maka onyinye a. Na mgbakwunye, a gaghị ana gị ego ọ bụla ma ọ bụrụ na ị kagbuo ntinye aha gị tupu oge ikpe ahụ gwụ.
Mgbe ahụ a ga-eduga gị na weebụsaịtị Navigator Ahịa, ọ bụkwa ebe dị iche na ya. Ihe ọ bụla ị mere ebe a agaghị emetụta akaụntụ LinkedIn gị nkịtị.
2. Melite Akaụntụ Gị
Ozugbo ị debanyere aha na akaụntụ, ịkwesịrị ịtọ ihe masịrị gị dika o kwesiri.
You nwere ike hazie gị Sales Navigator na akaụntụ mwube mmasị dị ka ọrụ aha, vetikal, na mpaghara na ị chọrọ nwaa.
Na mbu, Navigator Ahịa ga-enye gị nhọrọ iji chekwaa njikọ gị dị na LinkedIn dị ka ndị na-eduga. Ọzọkwa, ị nwekwara ike mekọrịta Sales Navigator na Salesforce ma ọ bụ Microsoft Dynamics 365 iji bubata kọntaktị na akaụntụ gị niile. Enwekwara ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ jikọta LinkedIn na ngwa ndị ọzọ ọ bụrụ na ị na-eji CRM ndị ọzọ.
N'oge a, ịmeela akụkụ mbụ nke ịtọlite ​​akaụntụ gị. Nwere ike ịlele ma chekwaa ụlọ ọrụ Ahịa Navigator na-atụ aro. Vingchekwa ụlọ ọrụ na akaụntụ gị na-enye gị ohere ịgbaso mmelite, soro ụzọ ọhụrụ, wee nata ozi ụlọ ọrụ akọwapụtara nke ọma.
Nke a na-eme ka ị mara nke ọma tupu mkparịta ụka mbụ gị na onye ahịa nwere ike. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịmabeghị ihe ụlọ ọrụ ịchekwa, ị nwere ike ịhapụ akụkụ a ma tinye ha ma emechaa.
N'ikpeazụ, ịkwesịrị ijupụta ihe ọmụma banyere ụdị ndu ndị ị na-achọ. Maka nke a, ị nwere ike tinye ozi gbasara mpaghara ahịa gị, ihe gbasara ụlọ ọrụ na ọrụ ị na-achọ.
3. Chọta Leads na atụmanya
Ihe ozo ikwesiri ime mgbe obula gi mechara choo ka ichoro ichota. Simplezọ dị mfe iji mee nke a bụ iji Lead Builder - ngwa ọrụ n'ime Ahịa Navigator nke na-enye nzacha ọchụchọ dị elu. Maka onye ọ bụla na-eji Ahịa Navigator, ịmara otu esi ewepu Onye Nrụpụta Ihe bụ ihe dị mkpa.
Iji mezie njirisi ọchụchọ gị, ị nwere ike ịchọ aha ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ akọwapụtara. Mgbe imesiri ịtọ ntọala ọchụchọ gị, pịa na Search nhọrọ iji hụ nsonaazụ ya. Navigator Ahịa ga-enye gị ọtụtụ data na nsonaazụ ya karịa ka ị ga-ahụ na ụdị nke LinkedIn.
N’akụkụ nsonaazụ ọ bụla, ị ga - ahụ Zọpụta dị ka Lead nhọrọ. Nwere ike iji nke a chekwaa atụmanya ndị dị mkpa. Jiri amamihe chọọ atụmanya gị kama ịhọrọ ndị mmadụ na ụsụ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịchekwa ndu na akaụntụ. Ebe a, akụkọ rụtụ aka na ụlọ ọrụ ndị ịchọrọ ịgbaso iji soro ihe ndị ọhụrụ.
N'akụkụ aka ekpe nke ibe ahụ, ị ​​ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ nzacha, gụnyere ụlọ ọrụ, aha, aha mbụ na aha ikpeazụ, koodu nzi ozi, nha ụlọ ọrụ, ọkwa ogo, na afọ ahụmahụ.
Na mgbakwunye, Navigator Ahịa na-enyekwa atụmatụ akpọrọ TeamLink. Nwere ike iji TeamLink nyocha nsonaazụ gị iji lelee njikọ njikọ ma ọ bụ njikọ otu. Ọ bụrụ na TeamLink hụrụ njikọ dị n'etiti atụmanya gị na otu onye otu, ị nwere ike ịjụ njikọ njikọ gị maka iwebata. N'ikpeazụ, mgbe ị gbakwunye atụmanya dịka ndu, ị ga-enwe ike ịlele ha na Leads tab.
4. Myọcha mmasị Mmasị
Na ntọala ntọala nke profaịlụ Ahịa Navigator gị, ị ga-ahụ Mmasị Ahịa n'etiti. Site na ebe a, ị nwere ike belata ndepụta ndị ahịa dị mma gị dabere na ụlọ ọrụ, ọdịdị ala, ọrụ, na ogo ụlọ ọrụ.
Mmasị ndị a ga-apụta mgbe ọ bụla ịlele profaịlụ nke atụmanya. Na LinkedIn ga-egosikwa gị idu ndu na-adabere na mmasị ị setịpụrụ.
Nke a bụ ihe kachasị mma atụmatụ atụmatụ na Ahịa Navigator. I nwekwara ike na-agba ọsọ dị elu search na ma na-eduga ma ọ bụ akaụntụ. Enwere ihe nzacha ọchụchọ 20 ị nwere ike itinye na nyocha gị. Ndị a gụnyere isiokwu, aha, ngalaba ụlọ ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
5. Nyochaa na Aka Gị Na-eduga
Na peeji nke Sales Navigator, ịnwere ike ịgbaso mmelite niile na nso nso a gbasara akụkọ a zoputara. Ihe dị mma banyere Ahịa Navigator bụ na ị nwere ike ịhụ mmelite ọbụlagodi site na ndị na-abụghị njikọ gị. Site na nghọta ndị a niile na atụmanya gị, ị nwere ike ide ozi InMail ka mma (ozi ziri ezi) iji tinye aka na ha.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ibelata mmelite gị, jiri nzacha ndị ahụ n'akụkụ aka nri nke ibe ahụ. Na Akaụntụ Akaụntụ, ị ga-enwe ike ịhụ ndepụta nke ụlọ ọrụ ịchekwara. Iji matakwuo banyere ụlọ ọrụ, pịa na nhọrọ Akaụntụ Lee. N'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta yana tinyekwuo ndị mmadụ ma chọta ozi kachasị ọhụrụ banyere ụlọ ọrụ ha.
Ọzọkwa, ị nwere ike pịa nhọrọ 'Ndị Ọrụ Niile' iji hụ onye ọ bụla na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ahụ. Nke a bụ a mara mma kensinammuo mma ebe ọ na-enyere gị jikọọ na onye ọ bụla na ụlọ ọrụ n'oge ọ bụla.
6. Mee Ndi ana-akpo
N'oge a, ị chọpụtala atụmanya gị ma gbasosie ike na nzụlite ha. Ugbu a, olee otu ị ga-esi kpọtụrụ ha?
Usoro kachasị mma ị nwere ike ịnwe maka ijide aka na akaụntụ gị bụ iziga ha ozi dị mkpa na oge. Site n'enyemaka nke Ndị Na-ahụ Maka Ahịa, ị nwere ike ịdị na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ LinkedIn nke onye na-azụ gị.
Nwere ike ịmata mgbe ị ga - esetị ma zipụ ha InMails. Ozi aghụghọ ma mepụta ndebiri n'ụzọ ga-eme ka mkparịta ụka bara uru. Na nke ahụ bụ kpọmkwem ụdị usoro mmekọrịta nke na-eme ka ụzọ gị nwee ọganiihu na-elekọta mmadụ.
Agbanyeghị, LinkedIn Sales Navigator nwere otu obere ọghọm. Ikwesiri iru aka nke obula n’ime ndu gi. Nke a na-eri nnukwu oge.
Otu ụzọ isi zere ọrụ ụtụ a bụ imezi usoro izi ozi gị. Nwere ike ịme nke ahụ naanị site na enyemaka nke ngwa ọrụ ngwa ọrụ LinkedIn.
Rịba ama na ọ bụghị ngwa ọrụ akpaaka niile dị mma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ nchekwa na arụmọrụ dabara nke ọma, ọ kacha mma ịhọrọ Ntughari n'ihi na gị na-elekọta mmadụ na-ere akpaaka usoro. Expandi na-eme ka nchekwa nchekwa nke akaụntụ gị site na mmejuputa oke nchekwa nchekwa ya maka ntinye na arịrịọ njikọ, izipu ozi n'ime oge ọrụ ọrụ, yana iwepu kpokọtara na-akpọ oku naanị otu Pịa.
Anyị maara na ire ere na ịtụ anya mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịbụ nnukwu ibu ma ọ bụrụ na ịnataghị ezigbo ngwaọrụ ma ọ bụ akụrụngwa kachasị mma. Iji ikpo okwu dị ka LinkedIn Sales Navigator na-ahapụ gị ka ị wuo ndepụta olile anya buru oke oke yana obere mbọ. Nwere ike were ndepụta ahụ wee bubata ya na Expandi, nke ahụ ga-arụ ọtụtụ ọrụ gị na-eri oge.
7. leverage Enwetara Site Ahịa Navigator
Enwere ọtụtụ atụmatụ na Ahịa Navigator ị nwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịmara otu esi eji ha eme ihe. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ ụfọdụ ndu ọhụụ, Onye Na - ahụ Maka Ahịa Na - ere Ọsọ nwere ike ịkwado ndu dabere na ozi profaịlụ gị yana ojiji.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere ndu na-ekwe nkwa ma na-arụ ọrụ dị elu, Sales Navigator na-enye gị ohere ịnye ndetu na mkpado na profaịlụ ndị ahịa. Ọ na-syncs gị CRM.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ịzụ ahịa LinkedIn inbound, Sales Navigator ga-enye gị visibilụ gbasaa. Yabụ, ịnwere ike ịlele onye lere profaịlụ gị anya. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịmata onye nwere mmasị na gị na nzukọ gị.
8. Nye atụmanya Uru
Na LinkedIn, atụmanya ndị mejupụtara Mmasị ngalaba nke profaịlụ ha na-emere gị nnukwu ihu ọma. Na ndabere a, ha na-enye gị ndepụta niile nke isiokwu ị nwere ike iji dị ka:
Ala nke mkparịta ụka iji ghọta ụdị onye ha bụ na ihe ndị ka mkpa
Maapụ okporo ụzọ maka otu ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa ya ga-esi gboo mkpa ha
Mara ihe ndu gị nwere mmasị na nghọta ka ngwaahịa gị nwere ike isi nye ha uru ha na-achọ bụ ụzọ dị mma. Ọ ga - enye gị nnukwu aka karịa ndị asọmpi na - echeghị maka ha ịhazi ụzọ ha na ndu ha.
9. Tinye Sales Navigator ndọtị na Chrome
Ọ bụ aghụghọ dị mfe na-azọpụta gị oge na ume dị ukwuu. Mgbatị ndọtị ụgbọ mmiri ahịa nke Chrome na-enyere gị aka ịhụ profaịlụ LinkedIn site na akaụntụ Gmail gị. Na mgbakwunye, ndọtị a nwekwara ike ịduzi gị na isiokwu ndị na-emebi ice, chekwaa ụzọ maka gị, wee gosi gị data TeamLink.
Ọ bụrụ n’ịgụ ebe a, enwere ike ị jụọ otu ajụjụ:
Ndi LinkedIn Sales Navigator ruru ego gi?
Iji zaa nkenke, ee, ọ bụ. Ọ bụ ezie na ndị obere azụmaahịa na ụlọ ọrụ azụmaahịa kwesịrị ibu ụzọ nwalee ụdị nweere onwe ha iji hụ ma ọ bara uru itinye ego na oge a, azụmaahịa buru ibu kwesiri iji ikpo okwu a maka ọkpọkọ ahịa ka mma na arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ahịa LinkedIn Navigator Demo Expandi LinkedIn akpaaka
Tags: b2bahịa b2bGbasarachọta nduchọta ndu na atụmanyachọta ndu na ntanetịchọta atụmanyaLinkedInNjikọ ụgbọ mmiri jikọtara ọnụmicrosoft na-agbanwe agbanwe 365onye na-ere ahiandị ahịa